Qualcomm's Snapdragon processors ndiyo inonyanya kubata SoCs mune Android smartphone nzvimbo. Samsung inoshandisa Snapdragon yayo Galaxy S mutsara muUS neKorea, uye zvakare inopa masimba michina kubva LG, OnePlus, uye chaizvo zvese OEM kugadzira mureza-giredhi mafoni iyo isingagadzise yayo pachavo silicon. Pane mukana wakakwirira kwazvo wekuti iwe uri kuverenga izvi pane chishandiso uchishandisa Qualcomm Snapdragon processor ikozvino.
Snapdragon machipisi haangowanikwi mune anodhura flagship smartphones kunyange. Iko kune yakazara portfolio yevagadziri yakavakirwa masoftware pamutengo wakasiyana wemitengo. Kuita uye maficha anosiyana kwakaringana pakati pemhando idzi, saka ngatitorei pasi nzira iyo yekambani kambani SoCs inofananidza uye izvo zvaunogona kutarisira.
Snapdragon 800 yakatevedzana - Premium tier
Kutsvaga yakanyanya kunaka Qualcomm smartphone processor? Ipapo iwe unoda iyo Snapdragon 865, yakasimba yekupedzisira uye yakasimba kwazvo chipset. Zvakanyanya kufanana neyakatangira, iyo chipset mutsva mutambo weCC-yakasarudzika tsika yeCCU, ine imwe ine simba 2.84Ghz Cortex-A77 musimboti, matatu asina simba asi achiri kugona chaizvo 2.4Ghz Cortex-A77 cores, uye ina yakadzika-powered asi inoshanda Cortex-A55 cores. Qualcomm's Adreno graphware inowedzerawo kutungamira indasitiri maererano nesheer simba uye kugona, uye iyo 865's Adreno 650 inoenderera iwo maitiro.
Modem X55 5G & RF hurongwa
7500 Mbps pasi
3000 Mbps kumusoro X24 LTE
2000 Mbps pasi
316 Mbps kumusoro X24 LTE
316 Mbps kumusoro
Cameras 200MP imwechete / 64MP imwe chete neZero Shutter Lag
24MP mbiri mbiri kamera
Hybrid AF, HDR vhidhiyo, yakawanda-furemu ruzha kuderedza 48MP single / 24MP pamwe chete
Hybrid AF, HDR vhidhiyo, yakawanda-furemu ruzha kuderedza
192MP mufananidzo 48MP single / 24MP pamwe chete
Kukurumidza Kutengesa 4+ 4+ 4+
MAKARALI USB 5.1 5.1 5.1
urongwa 7nm FinFET 7nm FinFET 7nm FinFET
Iyo 800 yakatevedzana ndiyo Qualcomm's flagship tier uye, kusvika kusvika 2018 Snapdragon 845, yakashandisa sumbu remasimba ane simba uye sumbu remagetsi anoponesa simba cores. Asi ma2019 Snapdragon 855 dzakateerana nguva yekutanga patinoona matatu-tier system yeorema / yepakati / yakajeka CPU cores. Qualcomm yaishandisawo kupa zvakanyanya yakarongedzwa yakagadzirirwa CPU cores kusvikira Snapdragon 821 kumashure muna 2016. Asi mazuva ano, anoshandisa Arm's Cortex cores uye anoita mashoma tweaks kwavari panzvimbo.
Nekudaro, kambani iyi yakaparara zvakakura mune mamwe mabhisiki eiyo silicon mune yayo macsets, semaGPU, modems, uye chiratidzo chiratidzo processors yemakamera. Kutaura nezve tekinoroji yekhamera, iyi ndiyo yekutanga Qualcomm yekutanga kutsigira vhidhiyo 8K kurekodha, kujoina Samsung's Exynos 982X series and Exynos 990.
Qualcomm Snapdragon 865 vs Kirin 990 vs Exynos 990: Vanofanana sei?
Iyo indasitiri inosimudzira kuenda pane-chishandiso chemuchina wekudzidzira yaona zvakare Qualcomm ichichinjika neiyo chiratidzo chayo SoS Iyo inoshandisa yepamusoro-yekupedzisira Hexagon digital chiratidzo processor yemabasa aya, iine Snapdragon 865's Hexagon 698 DSP zvakare ine anokwidziridzwa "Tensor" accelerator iyo ine 35% yakawedzera simba-kupfuura Snapdragon 855's ML-yakatarisana nesilicon.
MuChirungu chakajeka, izvo zvinoreva kuti muchina wekufunda mabasa sekutarisirwa kumeso, kucherechedzwa kwemifananidzo, kugadzirwa kwemitauro yechisikigo, uye zvimwe zviitiko zvinofanirwa kushandisa simba shoma kwazvo. Muchokwadi, Qualcomm akati zvakare iyo Snapdragon 865 inokwanisa pane-chishandiso izwi kududzira.
Iyo Snapdragon 865 zvakare iri 5G-inogoneswa, inotsigira zviri zviviri mmWave uye sub-6Ghz zviyero. Haisi yekutanga iyo 5G yekumaketeni chipset kubva kune chinyorwa kunyange, seyakaitika gore rapfuura Snapdragon 855 nhepfenyuro zvakare yakapa inotevera-chizvarwa chinongedzo. Ose maviri 855 akatevedzana uye 865 anopa ekunze 5G modems zvisinei, zvakasiyana nevamwe vakwikwidzi. Izvi zvinowanzoreva kushandiswa kwemagetsi kwakawanda kana kuchienzaniswa ne processor ine yakasanganiswa 5G modem.
Qualcomm haisi iyo chete kambani inogadzira mureza maratidziro, ine makwikwi chipsets inosanganisira iyo Samsung Exynos 990, Huawei's HiSilicon Kirin 990, neMediaTek's Dimensity 1000. Asi inowanzo kutariswa imbwa yepamusoro maererano nemaitiro uye zita rechiratidzo, kunyange vamwe vakwikwidzi vanowanzove nezvakawanda zvekupa zvakare.
Yakakurumbira Snapdragon 865 mafoni
Xiaomi Mi 10 akateedzera
Snapdragon 700 dzakatevedzana - Kuvhara iyo geji
Qualcomm's Snapdragon mazana manomwe akateedzana haana kutwasanuka senge mukurumbira wayo 700 inoteedzana. Izvi zvinokonzeresa nehuwandu hwadzo, uye pamwe nemapani ekupedzisira machipisi anoyambuka mune mazana matanhatu.
5G - 3700Mbps pasi, 1600Mbps kumusoro Snapdragon X15 LTE
800Mbps pasi, 150Mbps kumusoro Snapdragon X15 LTE
800Mbps pasi, 150Mbps kumusoro
Cameras 32MP isina kana 22MP maviri
192MP mufananidzo 48MP isina kana 22MP maviri
192MP mufananidzo 192MP mufananidzo
Kukurumidza Kutengesa 4+ 4+ 4
MAKARALI USB 5.0 5.0 5.1
urongwa 7nm FinFET 8nm FinFET 8nm FinFET
Iyo Snapdragon 700 yakatevedzana ndiyo yakanyanya yepamusoro-yepakati mhuri yevagadziri, pamwe ne Snapdragon 765 akateedzana kunge anokwanisa kwazvo iwo mujenya. Iyi ndiyo yekutanga mhuri yeQualcomm yepakati-5G, inotsigira vaviri mmWave uye sub-6Ghz flavour ye5G. Iyo inopa zvakare yakafanana neyepeturu simba domain domain CPU dhizaini seinogadzirisa mureza, zvakadaro mune 1 + 1 + 6 dhizaini pane 1 + 3 + 4 inoonekwa pane yakamisikidzwa SoCs.
Kunze kwekuwedzerwa kwe5G uye yakavhurika CPU marongero, iyo Snapdragon 765 nhepfenyuro zvakare yakatanhamara kubva kune vamwe mazana manomwe-akateedzana processors nekuda kwayo inyuchi Adreno 700 GPU. Mhuri ye620 zvakare inemitambo tunhu tudiki rwe 765nm kugadzira, parutivi rwemureza. Chigadzirwa chidiki chekugadzira kazhinji chinoreva kuwedzera-simba-dhizaini kugadzira kana zvese zvimwe zvakaenzana.
Iyo Snapdragon 765 yakatevedzana ichine zvinhu zvishoma zvakafanana Snapdragon 730 mfululizo uye Snapdragon 720G, anotevera padanda re totem maererano nesimba uye kugona. Tine octa-core CPUs ine maviri ane simba Cortex-A76 CPUs uye matanhatu Cortex-A55 cores, uye ane simba Spectra mufananidzo chiratidzo processors yakakwirira-resolution resolution.
Mediatek chip guide: Zvese zvaunoda kuti uzive nezveMediaTek processors
Samsung Exynos inotungamira: Izvo zvaunoda kuziva nezve Samsung processors
Izvi handizvo chete zve Snapdragon 700 dzakatevedzana machipisi, seyateedzana nharo ine 2018's Snapdragon 710 (ne Snapdragon 712 kuvandudza zvinyoro). Aya machipisi maviri achiri kupa 2 + 6 CPU musimboti mamiriro, asi shandisa akura Cortex-A75 cores panzvimbo peCortex-A76 inoonekwa mune nyowani 700 akateedzera SoCs. Saka tarisira kuti chipsets nyowani kudzima idzi kana zvasvika pakuita kamwe-musimboti, asi iwe uchiri kuwana kuita kwakanaka neimwe nzira.
Iyo Snapdragon 712 ne710 inopawo GPU yakaderera kune avo vambotaurwa vanogadzikana, saka kuita zvemitambo hakuzoite kunge kwakanyanya. Zvakangodaro, aya maGPU ane simba chaizvo uye anofanirwa kugona kubata mazhinji emitambo zvakanyatsokwana.
Iyo Snapdragon 700 ranga inogona kushaya CPU uye GPU simba reiyo mureza Snapdragon 800 mhuri ipapo, asi ine mashoma maitiro akafanana mune yepamusoro-yekupedzisira silicon zvakadaro. Iwe uchiri kuwana anokwanisa Hexagon DSPs yekudzidza zviri nani muchina, Kurumidza Kura 4 kana 4+ kutsigirwa, uye MAKARALI USB 5.0 or 5.1.
Uyezve, zvese izvi zvambotaurwa pamusoro chipsets inotsigira 192MP snapshots, kunyange zvichikwira pazasi zvakaderera resolution yemazhinji-chimiro kugadzirisa (semuenzaniso HDR, husiku maitiro). Iwe haungatore 4K / 60fps kana 8K pano kunyange, asi 4K pa 30fps inovimbiswa pane ino tier.
Yakakurumbira Snapdragon 710, 712, 720G, 730 / G, 765 / G mafoni
Xiaomi Nyaya Yangu 10
Snapdragon mazana matanhatu akateedzera - Kukosha kwemari
Iko iyo Snapdragon 700 yakatevedzana inoedza kuyambutsa iyo gidhi pakati wepakati uye mureza, iyo Snapdragon mazana matanhatu akateedzera zvakanyanya pane iyo $ $ 600 uye pasi pechikamu. Tinoti "kazhinji," nekuti Snapdragon 670 uye 675 chaiko kugovera zvakawanda zvakafanana nezvekutanga Snapdragon 700 akatevedzana processors (semuenzaniso Snapdragon 710).
Iyo Snapdragon 670 uye 675 inopa yakasimba Cortex-A75 uye A76 CPU cores dzakateerana, yakapetwa ine yakaderera-simba Cortex-A55 cores. Iwe unogona zvakare kutarisira maGPU akasimba (albeit akaderera kune mazana manomwe akatevedzana), kutsigirwa kweBluetooth 700, uye kukurumidza Kuita 5+. Iwo mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenomwe neshanu zvakare anounza iwo mazana manomwe emhuri rutsigiro rwezvinhu zvakaita se 4K kurekodha, 670MP mapikicha, uye 675MP mafoto ane akawanda-mafiricha kurongedza.
Verenga: Nzira yekunzwisisa sei Kryo CPU inoverengeka pane Qualcomm Snapdragon processors
Kufamba pasi, isu tinewo Snapdragon 665, inova iri nyoro kuvandudza pamusoro 2017's Snapdragon 660. Wese matatu machipi anoshandisa akura akanyanya CPU cores (mana Cortex-A73 akavezwa ane mana Cortex-A53 cores), uye asingakwanisi GPUs papepa. Saka tarisira kuwanda kwekuita, kutamba, uye kamera kuita kuti asarudze kumashure kweSnapdragon 670 uye 675. Muchokwadi, iyo Snapdragon 665 uye 660 pamusoro kunze pa 48MP snapshot rutsigiro (kureva. Isina kuwanda-mutsetse wokugadzirisa senge HDR), saka usabate kufema kwako 64MP or 108MP makamera ane ano processor.
Qualcomm ichangobva kuburitsa iyo Snapdragon 662, kunyanya kuve Snapdragon 665 dombo rine Bluetooth 5.1 kugona uye HEIF rutsigiro. Iyo yekupedzisira inoreva zviri nani mhando dzemifananidzo isina huwandu hwefaira kuwedzera pamusoro apfuura mafomu, kana yakafanana mhando pahafu hafu yemafaira.
Zvikasadaro, chingwa uye bhotela yeQualcomm's mazana matanhatu-inoteedzana ndiyo Snapdragon 636 uye 632. Aya ma processors anotarisisa mutengo wakaderera wepamberi pane zvakambotaurwa mazana matanhatu-ezviuru silicon, uye zvakare unounza mahombe makuru patafura (ina Cortex-A600 uye ina Cortex-A73). Iyo 53 ichiri kupa inokurumidza modem uye nekukurumidza Charge 636, iyo iyo Snapdragon 4 inoshaya. Either way, ese machipisi aya anoshandisa Adreno 632-Series GPUs, achivaita vashoma vanobvumirana pamitambo kupfuura Snapdragon mazana matanhatu akatevedzana chips.
150Mbps kumusoro X9 LTE
150Mbps kumusoro X6 LTE
Cameras 25MP isina kana 16MP maviri 24MP isina kana 13MP maviri 12MP isina kana 8MP maviri
Kukurumidza Kutengesa 4.0 3.0 3.0
MAKARALI USB 5.0 5.0 5.0
urongwa 14nm FinFET 14nm FinFET 12nm FinFET
Iyo Snapdragon 636 uye 632 chipsets inonyatso muchereketa-wepakati nepakati nepakati uye pakati-pekupera kugona. Asi ivo vachiri kutamba izvo izvo zvinogara zvichikosha eCPU cores, zvinoreva kuita kwakawanda (semuenzaniso system yekufamba, kuvhura / kurodha maapplication) haifanire kuve nyaya.
Yakakurumbira Snapdragon mazana matanhatu mafoni
Snapdragon 400 yakatevedzana - Kupinda-chikamu
Zvino tasvika kune asingakwanisi anokwanisa Snapdragon akatevedzana (padivi kubva iye zvino ari matombo Snapdragon mazana emhuri), yakagadzirirwa kupinda-chikamu Smartphones. Asi pane zvakanaka nhau pano, seyazvino Snapdragon 400 chipset iri chaizvo kukura kugadzirisa.
The itsva Snapdragon 460 ane zvakawanda zvakafanana pamwe Snapdragon 662, kusanganisira inorema CPU cores (ina Cortex-A73 uye ina Cortex-A53), yakafanana GPU, HEIF rutsigiro, MAKARALI USB 5.1, uye kunyange 48MP yakawanda-chimiro-chekutora kugona. Iyo chete chaiyo yepasi pasi ndeyekuti inongotarisirwa kuoneka mumafoni pakupera kwe2020.
Kana zvisina kudaro, the Snapdragon 450 uye makumi mana nemakumi mana nemapfumbamwe ndiwo makuru mazana mana-akateedzera machips aunowana mumafoni nhasi. Aya anopa octa-core magadzirirwo akavakirwa akadzika-powered Cortex-A439 cores, ane mwero zvikuru LTE anomhanya, uye isina tarisiro Adreno 400-Series GPUs. Mune mamwe mazwi, mafoni anofambiswa neaya machipi anogona kunetseka nemitambo yepamberi uye maitiro ezuva nezuva ehurongwa. Iwo ega makuru ekuponesa nyasha ndeekuti iwo akanaka masimba-anoshanda nekuda kwe53nm uye 500nm maitiro ekugadzira nenzira.
150Mbps kumusoro Snapdragon X9 LTE
300Mbps pasi, 150Mbps kumusoro Snapdragon X6 LTE
150Mbps pasi, 75Mbps kumusoro Snapdragon X6 LTE
150Mbps pasi, 75Mbps kumusoro
192MP mufananidzo 21MP isina kana 8MP maviri 16MP isina kana 8MP maviri
Kukurumidza Kutengesa 3.0 3.0 3.0 3.0
MAKARALI USB 5.1 4.1 5.0 5.0
urongwa 11nm FinFET 14nm FinFET 12nm FinFET 12nm FinFET
Iyo isingagone inokwanisa chipset mumhuri ye Snapdragon 400 ndiyo Snapdragon 429 zvisinei. Iyo inoderedza chikamu chepakati kusvika kungoti ina-simba-kupora Cortex-A53 cores, kumusoro kumusoro kuHD + screen resolution (hapana 1080p pano), uye inotsigira maviri 8MP kamera kana imwe chete 16MP sensor. Hazvisi zvese zvakashata hazvo, sezvo kuchine Kurumidza Charge 3.0 rutsigiro, uye kugona kweBlue 5. Ingotarisira makamera matatu kana kuita kwakanaka mumitambo ye3D.
Iyo Snapdragon 400 yakatevedzana inoita zvidzidziso zvakaringana, sekufona, zvemagariro, WhatsApp, uye kubhuroka kwewebhu. Asi avo vanoda kuitirwa kwakanaka mutambo, inokurumidza kuchaja, yazvino Bluetooth chiyero, uye akanakisisa makamera anofanira kutarisa kumwe kunhu.
Ndidzo chete nezve yedu Qualcomm Snapdragon SoC gwara! Rega tizive pfungwa dzako pane iyo silicon hoforiji mune mhinduro.
Qualcomm Details Iyo Snapdragon 888: 3rd Gen 5G & Cortex-X1 pane 5nm
Qualcomm Inosheedzera Snapdragon 845 Mobile Platform: Tocks Inotevera-Gen CPU Cores, GPU, AI, & Zvimwe